Daty : 03/01/2015
Lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra satria dia nomeny tombon’andro manokana isika ka mahatratra izao taona vaovao 2015 izao. Noho izany dia amin-kafaliana lehibe no itondrana ny fiarahabana sy firarian-tsoa ho antsika rehetra. Enga anie ny fahasoavan’Andriamanitra Ray izay nandefa an’i Jesoa Zanany noho ny herin’ny Fanahy Masina, hanenika ny fiainantsika tsirairay avy mandritra izao taona vaovao manomboka izao mba hahafahantsika miaina ao anatin’ny fitiavana, filaminana, fiadanam-po ary fahombiazana tanteraka amin’izay atao, na eo aza ny fahasarotan’ny fiainana amin’izao vanin’andro diavintsika izao. Androany moa no Alahady voalohany amin’ity taona vaovao ity ka rariny raha izay fiararian-tsoa sy fiarahabana izay no ifanolorantsika voalohany. Mbola ao anantin’ny fankalazana tanteraka ny Mistery nahatongavan’ny Zanak’Andriamanitra ho nofo ihany koa isika androany satria araka ny fandaharan’ny Fiangonana azy dia ity Alahady anio ity no fankalazana ny Epifania. Araka ny efa nambarantsika teto tamin’ny taona lasa dia isaky ny Alahady faharoa manaraka ny Noely no ankalazana ny Epifania. Tsara ho marihina anefa fa amin’ny firenena sasany dia tsy anio no ankalazana ity fety lehibe ity fa isaky ny faha-06 janoary na tsy andro Alahady aza io daty io.
Ary novalian’i Jesoa hoe : Efa voalazanao : Mpanjaka Aho >